Ewepụghị ihu haịdrọlik ngwa ngwa njikọ (carbon ígwè) / mba intercange ISO 16028
NDRE KWURU TOBỌCHNDER B PR NT PRKWU (BRASS) / Acoples Hidraulicos Tuerca de Mariposa
EN 856 4SP nchara waya nke kpochara hydraulic sooks kwesịrị ekwesị maka nkwado hydraulic na akụrụngwa metụtara. Na sooks na-eguzogide ọgwụ ọkụ na static. Ọ bụ n'ihi na nnukwu elu nsogbu usage.The mgbali si 450bar ka 165bar.
SAE100 R2AT / EN853 2SN, Ngwongwo igwe eji eme ka uzo abuo di nma kwesiri ka o buru mmiri na mmiri nke hydraulic na-aru oru na -40 ° C rue +100 ° C. Ọ na-bụ-eji maka n'èzí ngwa ndị dị otú ahụ dị ka n'ụsọ oké osimiri, oké ọhịa, m na ndị ọzọ na-ewu & ugbo igwe.
SAE100 R1AT / EN 853 1SN, otu nchara waya wusiri ike hydraulic sooks A na-ejikarị ya eme ihe na sistemụ hydraulic dị elu maka mmiri mmiri nke mmanụ ala. Enwere ike iji ya maka igwe ugbo, igwe ihe eji eme ihe, minings, Ọ na-eguzogide abrasion, corrosion na nrụgide dị elu.
KZB ISO 7241 B usoro HYDRAULIC Ngwa COUPLINGS (ígwè)
ISO 7241 A SIRI NTULKWU AHY AKWYKWỌ AKW (KWỌ (ACOPLES RAPIDOS)
Akwa nsogbu washer sooks oyiyi akwa
POLYPROPYLENE CAMLOCK OULỌ
Steel njikọ Ground Joint njikọ
Emere Mkpịsị Mkpịsị Mkpịsị Ground maka ikuku abịakọrọ, uzuoku
Njikọ ọnụ nke ụwa - Tdị US (Ọgwụgwụ njedebe / njedebe nwoke / njedebe nwanyị)
Ngwakọta jikọrọ ọnụ-US TYPE Univesal sooks njikọ, makwaara dị ka Chicago na aire sooks couplings, nwere yiri mboanuohia-atyle isi na-enye gị ohere jikọọ ọzọ Chiavago sooks Couplings, n'agbanyeghị nke ọkpọkọ size ma ọ bụ barbed sooks NJ.
P.DOUBLE BOLT MGBE / 2 BOLT MBA